Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ)
Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ငါ့ဆီမှာ Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Meningitis (ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Meningitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meningitis/basics/definition/con-20019713. Accessed Jul 14 2016
Meningitis. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000680.htm. Accessed Jul 14 2016Meningitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meningitis/basics/definition/con-20019713. Accessed Jul 14 2016
Meningitis. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000680.htm. Accessed Jul 14 2016
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 3, 2017
သမားရိုးကျမဟုတ်သော အဆုတ်ကင်ဆာ ကုထုံးများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ အဆုတ်ကင်ဆာအဖြစ်များလာနေတာကို သင်သိပါသလား
သင့်မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ တခြားသူတွေက အဆုတ်ကင်ဆာသည် သင့်ကလေးကို ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ
နာတာရှည် အဆုတ်လေပြွန်ကျဉ်း ရောဂါနှင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါတို့ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသေအပျောက်အများဆုံး ရောဂါငါးမျိုး